"Anigoo maalintii dumarka soo baxay ayey igu dhaheen: 'haweeney ma tihid'" - Jigjiga Online
HomeArimaha Bulshada“Anigoo maalintii dumarka soo baxay ayey igu dhaheen: ‘haweeney ma tihid'”
“Anigoo maalintii dumarka soo baxay ayey igu dhaheen: ‘haweeney ma tihid'”
Dowladda Panama waxay sharci adag u yeeshay xayiraadda lagu xakameynayo cudurka coronavirus, iyadoo ragga u oggolaatay inay danahooda bannaanka soo fushadaan maalmo gooni ah, dumarkana maalmo kale oo u gaar ah.
Monica waxay ku dheereysaa xirfadda cunto karinta. Sida ay dad badan oo kaleba sameeyaan, inta lagu guda jiro xayiraadda uu sababay coronavirus waxay sameyneysay raashin kala duwan, si ay isku mashquuliso saacadaha badan ee ay guriga joogto.
Maalin Arbaco ah oo ka mid ah bishii lasoo dhaafay, Monica waxay go’aansatay inay sameyso cuntooyin ka kooban hilibka digaagga, basbaas iyo bariis lagu sii daray waxyaabo kale oo dhandhanaan ah.
Inta badan waxyaabaha ay u baahan tahay way heysatay laakiin waxaa ka dhimanaa hilib digaag.
Sidaas darteed way kasoo baxday gurigeeda yar ee ku yaalla meel u dhow garoonka diyaaradaha ee caasimadda Panama City, halkaasoo ay la daggan tahay qoyskeeda intiisa kale.
Waxay dooneysay inay hilibka kasoo iibsato dukaan ku yaalla luuq gurigeeda agtiisa ah.
Intii ay waddada sii socotay haween badan ayey sii dhex martay, oo qaarkood ay carruurtooda gacanta ka heystaan. Xaafadda sidii caadiga ahayd way ka xasilooneyd, maadaama dowladdu ay xilli dhow soo saartay sharciga lagu xakameynayo faafitaanka Covid-19.
Dumarka waxaa loo fasaxay inay adeegyada muhiimka ah doontaan maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcada, halka raggana loo oggolaaday inay soo baxaan maalmaha Talaadada, Khamiista iyo Sabtida. Axadda, qof kasta waa inuu gurigiisa joogo.
Monica way soo gashay dukaankii. Way taqaannay qoyska Shiineyska ah ee dukaankaas iska lahaa. Aad bay iyagana u jeclaayeen. Laakiin markii ay gudaha usoo dhaaftay, xaaladdii way isbaddashay. Ninkii dukaanka lahaa ayaa xageeda usoo dhaqaaqay isagoo aamusan, wax dhoollacaddeyn ahna aysan wajigiisa ka muuqanin, sidii ay horay ugu taqaannayna aan ahayn.
“Makuu adeegi karno, Monica,” ayuu yiri. “Booliska waxay nagu amreen inaan dumarka oo kaliya u shaqeyno maanta. Waxay dheheen, ‘Labeeb warkiisa ma jiro.'”
Xoogaa way dhibsatay eraygaas loo adeegsado dadka unugyada jirkooda iyo xubnahooda taranka aysan rag iyo dumar midna u badneyn. Laakiin aad ma aysan ula yaabin. Booliska qudhooda ayaa xaafaddeeda dhowr jeer oo hore ku dhibaateeyay, iyagoo ku maagaya inay tahay labeeb.
Inkastoo Monica ay tahay labeeb haddana sida ka muuqata waxay go’aansatay inay raacdo dhinaca dumarka. Labiskeeda iyo muuqaalkeeda guudna waa haweeney.
Monica waxay iskuulka billowday iyadoo u labisan jirtay sidii gabdhaha, markaasna da’deedu waxay ahayd 12 sano. Waligeed ma aysan dareemin inay wiil tahay.
Haddana waxay rabtay inay caddeyso waxa ay tahay.
Inay gabar ahaan ugu soo dhex korto guriga qoyskeeda waxay kasoo martay xaalado adag.
“Aabahay wuxuu ahaa nin neceb labeebka,” ayey tiri Monica. “Wuxuu rabay inuu helo marmarsiiyo uu igu garaaco, sidoo kalena wuxuu garaaci jiray labo gabdhood oo ay hooyadey dhashay.”
Monica waxay waligeedba sameysan jirtay timo dheer, waxayna xiran jirtay dhar ku dhaggan.
Markii ay iskuulka dhiganeysay waxaa loogu shactireysan jiray qaabka ay iska dhigto. Sidaas awgeed way iska qarsan jirtay xaaladdeeda. Ugu yaraan waxay heysatay saaxiibtinnimada gabdhaha kale ee walaalaheed ah iyo jacaylka hooyadeed.
Kaddib, markii ay soo gaartay 14 jir, aabaheed ayaa u geeriyootay si lama filaan ah, qoyskeeduna waxay waayeen meeshii kaliya ahayd ee uu dakhliga kasoo gali jiray.
Monica waxay dareentay in iyada laga rabay inay reerka u istaagto.
Haddaan dib ugu laabanno arrintii ka socotay dukaankii ay hilibka digaagga u doonatay, milkiilihii oo ka raalligalinaya xaaladda markaas taagan ayaa u sharraxay Monica in isaga rabitaankiisa uusan ahayn inuu dukaankiisa ka eryo. Waa amar toos uga soo baxay booliska.
Hadda oo ay Monica da’deeda tahay 28 sano, waxay qoyskeeda usoo shaqeyneysay muddo 24 sano ah.
Tan iyo markii ay billaabatay saameynta coronavirus, waxaa istaagtay shaqadeedii, in lacag la helana aad bay u adagtahay.
Guriga waxaa kula nool siddeed xubnood oo ka mid ah qoyskeeda. Labada gabdhood ee walaalheed ah waxay leeyihiin carruur, oo afar ayey kala heystaan.
Labadooduba waa iskaabulo, midkood ayaana mar aan dheereyn la kulantay xiriir tacaddi ku dhisan, mana shaqeeyaan.
Xitaa Monica hooyadeed ma shaqeyso. Reerka oo dhan waxay sugi jireen kharashka ay kasoo hesho shaqo ay u arkeysay inay tahay midda kaliya ee ay sameyn karto.
Markii laga soo eryay dukaankii, oo guriga ay kusoo laabatay, telefoonka Monica waxaa kusoo dhacay farriin laga soo diray WhatApp-ka.
Waxay farriintaas ka timid ninkii dukaanlaha ahaa. Wuxuu u sheegay inuu si xun dareemay markii ay gurigeeda ku laabatay iyadoo faro maran. Wuxuu ka codsaday inaysan mid ka mid ah gabdhaha walaalheed ah soo dirin si ay hilibka ugu soo qaadaan, laakiin uu isagu lugihiisa ugu keeni doono.
Monica markaas way dhoollacaddeysay. Waxay dareentay in wali bulshadeeda ay naxariis ku dambeyso, ayna diyaar u yihiin inay caawiyaanxilligan lagu jiro xayiraadda.
Waxay dooneysaa inay sii waddo caawinta qoyskeeda.
Maalintii xigtay ayey go’aansatay inay baxdo, waxayna ahayd maalintii ragga.
Laakiin markan waxaa ku dhacday xaalad ka daran tii maalintii hore.
Waxay aadday dukaan weyn oo alaabo badan lagu iibiyo, si ay wax kasta uga soo hesho, muddo dhowr isbuuc ahna ay ku nastaan.
Markii ay gaartay albaabkii, waxay gashay safkii lagu sugayay galitaanka, balse aad buu u dheeraa safka.
Qof walba oo reer Panama ah waxaa loo oggol yahay inuu isbuucii saddex maalmood bannaanka usoo baxo, laakiin 2 saacadood kaliya uu ka maqnaado gurigiisa.
Monica cabaar ayey ku jirtay safkii ragga, iyaguna way qashqashaadayeen.
Waqtiga aad buu isu gurayay. Kaddib waxaa dhammaatay labadii saacadood ee ay heysatay.
Isla waqtigaas, lix askari oo boolis ah ayaa Monica kaligeed kasoo dhex baxsaday raggii safkooda.
“Waxay ii sheegeen in aan bannaanka joogo waqti ka badan xilligii la iigu talagalay inaan dukaanka ku maqnaado,” ayey tiri.
“Waxay billaabeen inay jirkeyga baaritaan ku sameeyaan. Mid ka mid ah ayaa xabadkeyga gacmaha ku qabtay, isagoo qoslaya ayuuna igu yiri, ‘Adiga ma tihid haweeney,’ wuuna i aflagaadeeyay.
Qof walba wuu u jeeday waxa igu dhacaya, dhammaantoodna way iska sii jeesteen iyagoo aan waxba sameynin.
Monica waxay sheegtay in xilligaas ka hor aysan waligeed kalinimo sidaas u dareemin.
“Maalmaha ragga iyo dumarka loo kala qoodneeyay waxay ka dhigan yihiin in aan wax qorshe ah loo sameynin bulshada labeebka ah, oo la iska nacay,” ayuu yiri Cristian González Cabrera, oo ka tirsan hay’adda xuquuqda aaanaha ee Human Rights Watch.
“Waxaan aragtay kiisas kale oo sida Monica keeda oo kale ah. Waa arrin laga murugoodo in qof sidaas loo faquuqo,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Ururka labeebka ee dalka Panama ayaa sheegay in tan iyo markii sharciga kala qoondeynta maalmaha lasoo rogay ay in ka badan 40 qof oo bulshadooda ah ay usoo dacwoodeen kaddib markii la dhibaateeyay iyagoo adeeganaya ama xitaa dawo soo iibsanaya.
Monica kuma qanacsana sida ay dowladdu u maareyneyso howshan.
BBC-da ayaa wasaaradda Amniga dadweynaha ee Panama weydiisay su’aalo ku saabsan dhacdooyinkan iyo sida ay ula tacaalayaan, laakiin way ka gaabsadeen inay ka jawaabaan.
Xogasho: BBC Somali
Madaxweyne Afrikaan Ah Oo Hadallo Layaab Leh Ka Sheegay Fayraska Korona